Sọpụrụ 20 ga-abịa na nhazi nke igwefoto azụ anọ | Androidsis
Sọpụrụ, Huawei si sub-ika, na-akwadebe ẹkedori ya smartphones si Sọpụrụ 20 usoro na mmemme mmemme na May 21 na London. Tupu nke a, ụlọ ọrụ amalitela ịmalite na atụmatụ nke ekwentị ndị na-abịanụ.
N'otu n'ime teas ndị a, ụlọ ọrụ ahụ wepụtara onyonyo na Weibo yana nkọwa nke na-agụ "Mma dị egwu, foto anọ." Nke a gosipụtara nke ahụ the Honor 20 nke ga-abịa na igwefoto igwefoto quad na azụ azụ, ihe e kwupụtara na mbụ.
Na mbụ, onyonyo nke ntọala igwefoto azụ ekwentị agbaala na ntanetị. Na-ekpughe na na Honor 20 ga-enwe a Sony IMX586 48 MP dị ka isi ihe mmetụta, tinyere oghere 16 MP dị oke obosara, nke atọ sensọ 2 MP, na ihe mmetụta 2 MP ọzọ, ikekwe maka nchọpụta omimi.
Nkwenye nke ese foto anọ nke azụ nke Honor 20
Na-asọpụrụ Onye isi ala Zhao Ming kesara foto abalị na Weibo, enwere ike iji Honor 20 ma ọ bụ Honor 20 Pro were mee ihe. Ihe oyiyi a nwere nkọwa zuru oke, mbelata mkpọtụ, ma weghara ezigbo ọkụ.
Dịka leaks, Honor 20 ga-enwe a 6.26-anụ ọhịa IPS-LCD ihuenyo na skips notch maka a ntụmadị-onu imewe. Ọ na-enye mkpebi ihuenyo nke pikselụ FullHD + 2,340 x 1,080 na njupụta nke 412 dpi.
The smartphone ga-kwadoro site na ụlọ ọrụ nwere flagship chipset, nke bụ onye ọzọ karịa HiSilicon Kirin 980, tinyere 6GB nke RAM na 128GB nke nchekwa dị n'ime. Ntọala ncheta ndị ọzọ nwere ike ịbụ, mana nke dị n'elu bụ maka Europe.
Ngwaọrụ ahụ enweghị nyocha akara mkpịsị aka azụ, mana ebe ọ bụ na ekwentị ahụ nwere ihuenyo IPS-LCD, ọ nweghị nyocha nyocha mkpịsị aka. Ya mere, Honor ebiela maka igwe nyocha akara mkpịsị aka n'akụkụ nke na-eme ka bọtịnụ ike.. Anyị ahụworị nke a na Samsung Galaxy S10e.
Ekwentị na-eji sistemụ arụmọrụ A gam akporo 9 achịcha ya na Ime Anwansi UI 2.1 n'elu, yana ikike niile nke batrị 3,750 mAh na-akwado 22.5 W SuperCharge ngwa ngwa nwere ike ịnye. N'ikpeazụ, Honor 20 ga-adị na Midnight Black na Sapphire Blue, mana amabeghị ozi ọnụahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Sọpụrụ na-akwado modul igwefoto azụ elele nke Honor 20 flagship
Otu esi ehichapụ akaụntụ Telegram gị kpamkpam